सबै मानिसहरु को लागी मुक्ति - भगवान स्विट्जरल्याण्ड को विश्वव्यापी चर्च
लेख > प्रवचन > सबै मानिसहरूको लागि मुक्ति
धेरै वर्ष अघि मैले पहिलो पटक सन्देश सुनेँ, जसले मलाई त्यसबेलादेखि धेरै पटक सान्त्वना दियो। म अझै पनि यसलाई बाइबलको एक महत्त्वपूर्ण सन्देशमा विचार गर्दछु। सन्देश यो हो कि भगवानले सारा मानव जातलाई बचाउनुहुनेछ। परमेश्वरले एउटा मार्ग तयार गर्नुभयो जुनमा सबै मानिसहरूले मुक्तिको लागि पुग्न सक्दछन्। अब उसले आफ्नो योजना कार्यान्वयन गर्दैछ। हामी पहिले परमेश्वरको वचनमा सँगै उद्धारको बाटो खोज्न चाहन्छौं। रोमीहरूले लेखेको पत्रमा मानिसहरू आफूलाई भेट्टाउँछन् भनेर पावलले वर्णन गरे।
भगवान मानिसहरूकालागि गौरवको अभिप्राय थियो। यसलाई हामी मानव खुशी भन्छौं, हाम्रो सबै चाहनाहरूको पूर्ति। तर हामी पापले यस महिमालाई हरायौं वा हरायौं। पाप महान् अवरोध हो जसले हामीलाई महिमाबाट अलग गरेको छ, एउटा अवरोध जुन हामी पार गर्न सक्दैनौं। तर परमेश्वरले यो अवरोध आफ्नो छोरा येशू मार्फत हटाउनुभएको छ।
मुक्ति भनेको बाटो हो जुन परमेश्वरले योजना गर्नु भएको छ कि उनीहरूले फेरि परमेश्वरको महिमा प्राप्त गर्न सक्नेछन्। परमेश्वरसँग एउटा मात्र तरिका छ, तर एउटा तरिका, तर मानिसहरूले घुमाउरो र अन्य तरिकाहरू प्रस्ताव गर्छन् र मुक्ति पाउन छनौट गर्छन्। हामी यति धेरै धर्महरू जानेको यो नै एउटा कारण हो। येशूले यूहन्ना १:: in मा आफैंमा भन्नुभएको थियो: " म बाटो हुँ »। उनले भनेन कि उहाँ धेरै तरिकाहरू मध्ये एक हुनुहुन्छ तर बाटो। पत्रुसले उच्च समितिको समक्ष यस कुराको पुष्टि गर्‍यो:
"र अरू कुनै मुक्ति छैन (उद्धार), पनि छ अरु कुनै नाम छैन unter dem Himmel den Menschen gegeben, durch den wir sollen selig (gerettet) werden» (Apostelgeschichte 4,12).
एफिससमा भएको मण्डलीलाई पावलले पत्र लेखे:
Too तपाईं पनि आफ्नो अपराध र पाप द्वारा मरेका थिए। यसैले यो याद राख्नुहोस् कि तपाईं जन्मजात मूर्तिपूजकहरू हुनुहुन्छ र खतना नगर्नेहरूद्वारा खतना गरिएको हुनुभएको थियो, कि त्यसबेला तपाईं ख्रीष्टविना हुनुहुन्थ्यो, इस्राएलको नागरिक अधिकारबाट बञ्चित हुनुहुन्थ्यो र प्रतिज्ञाको करारबाहिर अपरिचित हुनुहुन्थ्यो; त्यसैले तपाईं थियो आशा छैन und wart ohne Gott in der Welt» (Epheser 2,1 und 11–12).
हामी गाह्रो परिस्थितिमा विकल्पहरू र विकल्पहरू खोज्दछौं। यो सहि छ। तर जब यो पापको कुरा आउँछ, हामीसँग एउटा मात्र विकल्प हुन्छ: येशू मार्फत मुक्ति। सुरूदेखि नै परमेश्वरले चाहानु भएको यो बाहेक अरु कुनै मार्ग छैन, कुनै विकल्प छैन, अर्को आशा छैन, अर्को कुनै सम्भावना छैन: उनको छोरा येशू ख्रीष्ट मार्फत छुटकारा .
यदि हामीले यस तथ्यलाई दिमागमा राख्यौं भने त्यसले प्रश्नहरू खडा गर्छ। धेरै इसाईहरूले आफैलाई सोधेका प्रश्नहरू:
रूपान्तरण नगर्ने मेरा प्रिय मृतक आफन्तहरूको बारेमा के हुन्छ?
आफ्नो जीवनमा येशूको नाम कहिल्यै नसुनेको लाखौं मानिसहरू नि?
येशूलाई नजान्ने मरेका थुप्रै निर्दोष बच्चाहरू नि?
के उनीहरूले येशूको नाम कहिल्यै नसुनेकोले कष्ट भोग्नुपर्‍यो?
यी प्रश्नहरूको धेरै उत्तरहरू दिइएका छन्। कसै-कसैलाई विश्वास छ कि परमेश्वरले केवल केही मानिसहरूलाई बचाउन चाहानुहुन्छ, जसलाई उहाँले संसारको जग बसाल्नु अघि चुन्नु भएको थियो। अरूहरू सोच्दछन् कि अन्ततः परमेश्वरले सबैलाई बचाउनुहुनेछ, चाहे उनीहरूलाई मन परोस् वा नहोस्, भगवान निर्दयी छैनन्। यी दुई धारणा बीच धेरै शेडहरू छन् जुन मैले चर्चा गरिरहेको छैन। हामी आफूलाई परमेश्वरको वचनको भनाइमा समर्पण गर्छौं। परमेश्वर सबै मानिसका लागि छुटकारा चाहनुहुन्छ। यो उनको अभिव्यक्त इच्छा हो, जुन उनले स्पष्ट रूपमा लेखेका थिए।
"यो राम्रो र भगवानलाई खुशी छ, हाम्रो उद्धारकर्ता, जो चाहन्छ त्यो सबै मानिसहरूलाई मद्दत गरिन्छ र तिनीहरू सत्यको ज्ञानमा आउँदछन्। किनकि यो परमेश्वर र मानिस बीचको एक परमेश्वर र मध्यस्थकर्ता हो, अर्थात् मानिस ख्रीष्ट येशू, जसले आफैंको लागि आफूलाई दिनुभयो सबै मुक्तिको लागि » (1. Timotheus 2,3–6).
परमेश्वर सबैको लागि मुक्तिको चाहना गर्नुहुन्छ भनेर स्पष्ट रूपमा देखाइन्छ। आफ्नो शब्दमा उनले कोही पनि हराउने छैन भनेर आफ्नो इच्छा प्रकट गरे।
Some कसै-कसैलाई आफूले गरेको प्रतिज्ञालाई प्रभुले ढिलाइ गर्नुहुन्न; तर उहाँ तपाईंसँग धैर्यता राख्नुहुन्छ र कोही हराएको होस् भन्ने चाहँदैन , sondern dass jedermann zur Busse finde» (1. Petrus 3,9).
अब कसरी परमेश्वरले आफ्नो इच्छालाई व्यवहारमा उतार्नुहुनेछ? परमेश्वर आफ्नो वचनमा अस्थायी पक्षलाई जोड दिनुहुन्न, तर कसरी आफ्नो छोराको बलिदानले सम्पूर्ण मानिसजातिको उद्धार गर्छ। हामी यस पक्षमा आफूलाई समर्पण गरिरहेका छौं। येशूको बप्तिस्मामा बप्तिस्मा दिने यूहन्नाले एउटा महत्त्वपूर्ण तथ्य औंल्याए:
"भोलिपल्ट यूहन्नाले येशू आउँदै गरेको देख्नुभयो र भन्नुभयो: हेर, यो परमेश्वरको थुमा हो, त्यो संसारको Sünde trägt» (Johannes 1,29).
येशूले यस पापको भाग मात्र होइन, संसारका सबै पापहरू लिनुभयो। उसले सबै अन्याय, सबै दुश्मनी, सबै खराबी, हरेक छल र सबै झूटालाई लिएको छ। उसले सारा संसारभरि पापहरूको ठूलो भारी बोक्नुभयो र सबै मानिसका लागि मर्नुभयो, पापको दण्ड।
«र यो हाम्रा पापहरूका लागि मेलमिलाप हो, केवल हाम्रो लागि मात्र होईन तर तिनीहरूका लागि पनि हो सारा संसार » (1. Johannes 2,2).
आफ्नो महान् कामको माध्यमबाट, येशूले सारा संसारका लागि, सबै मानिसहरूका लागि तिनीहरूको मुक्तिको ढोका खोलिदिनुभयो। येशूले बोक्नु भएको पापको बोझको बोझ र दु: ख र कष्ट सहनुपरेतापनि, येशूले सबै मानिसहरूलाई प्रेमको कारण, हामीप्रतिको गहिरो प्रेम र सबै चीज बोक्नुभयो। मा प्रख्यात शास्त्रले हामीलाई भन्छ:
«तसर्थ, भगवान् हुनुहुन्छ संसारलाई माया गर्‍यो , dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben» (Johannes 3,16).
उहाँले हाम्रोलागि «सुख» बाट बाहिर गर्नुभयो। दु: खी भावनाहरूमा लिप्त हुनका लागि होइन, तर सबैको लागि गहिरो स्नेह बाहिर।
"किनभने यसले भगवानलाई खुशी तुल्यायो , dass in ihm (Jesus) alle Fülle wohnen sollte, und er durch ihn सबै कुरा मिलाप थियो , es sei auf Erden oder im Himmel, indem er Frieden macht durch sein Blut am Kreuz» (Kolosser 1,19–20).
के हामीले बुझ्यौं कि येशू को हुनुहुन्छ? उहाँ "मात्र" सबै मानिसजातिको उद्धारक हुनुहुन्न, उहाँ यसको सृष्टिकर्ता र सहयोगी पनि हुनुहुन्छ। उहाँ व्यक्तित्व हुनुहुन्छ जसले हामीलाई र विश्वलाई आफ्नो वचनको माध्यमबाट अस्तित्वमा ल्याउनुहुन्छ। यो उहाँ नै हुनुहुन्छ जसले हामीलाई जीवित राख्नुहुन्छ, हामीलाई खाना र लुगा प्रदान गर्नुहुन्छ, जसले अन्तरिक्ष र पृथ्वीमा सबै प्रणालीहरू राख्नुहुन्छ ताकि हामी पनि अस्तित्वमा छौं। पावलले यस तथ्यलाई औँल्याउँछन्:
"किनभने उहाँमा सबै थोक सृजिएको छ स्वर्ग र पृथ्वीमा के छ, देख्न सकिने र अदृश्य, तिनीहरू सिंहासनमा होस् वा शासकहरू, शक्तिहरू वा शक्तिहरू; सबै कुरा उहाँ र उहाँतर्फ सिर्जना गरिएको छ। र सबै भन्दा माथि, र यो सबै मा यो छ » (Kolosser 1,16–17).
येशू उद्धारक, सृष्टिकर्ता र बचाउकर्ताले उहाँको मृत्यु हुनुभन्दा केही समय अघि एउटा विशेष भनाइ गर्नुभयो।
I र म, जब म पृथ्वीबाट उचालिन्छु, म गर्नेछु सबै zu mir ziehen. Das sagte er aber, um anzuzeigen, welchen Todes er sterben würde» (Johannes 12,32).
येशूको मतलब “क्रूस” भनेको उनको क्रूसमा टाँगिएको थियो जसले उसको मृत्यु ल्यायो। उनले भविष्यवाणी गरे कि उनी सबैलाई यो मृत्युमा सामेल पार्नेछन्। जब येशू सबैलाई भन्नुहुन्छ, उहाँ सबै मानिस, सबै मानिस हुन्। पावलले यो सोच लिए:
क्रूसमा ख्रीष्टको मृत्युसँगै, उनले सबैलाई एक अर्थमा मृत्यु ल्याए, किनकि उनले ती सबैलाई आफैंमा क्रूसमा झुण्ड्याए। सबै उनीहरूको मुक्तिदाताको मृत्युबाट मरे। यस विकराल मृत्युको स्वीकृति यसैले सबै व्यक्तिलाई उपलब्ध छ। तथापि, येशू मरेर बस्नुभएन, तर उहाँ आफ्नो बुबाबाट बिउँतनुभयो। उनको पुनरुत्थानमा उनले सबैलाई पनि सामेल गरे। सबै व्यक्तिहरूको पुनरुत्थान हुनेछ। यो बाइबलको आधारभूत भनाइ हो।
येशूले यस भनाइको लागि समय बताउनुभएन। यी दुई पुनरुत्थानहरू एकै समयमा वा बिभिन्न समयमा भएका हुन् भनेर येशू उल्लेख गर्नुहुन्न। हामी न्यायको बारेमा केहि बाइबल अंशहरू पढ्नेछौं। यहाँ हामीलाई न्यायाधीश को हुनेछ भनेर देखाइएको छ।
«किनकि बुबाले कसैको न्याय हुँदैन, तर सबै न्याय छ छोरालाई हस्तान्तरण यसरी तिनीहरू सबैले छोराको आदर गर्छन्। जसले छोरालाई आदर गर्दैन उसले पितालाई पनि आदर गर्दैन जसले उहाँलाई पठाउनु भयो। र उसलाई अदालत राख्ने अधिकार दियो किनभने ऊ मानिसका पुत्र हो » (Johannes 5, Verse 22 – 23 und 27).
न्यायाधीश जसको अघि सबै जिम्मेवार छन् येशू ख्रीष्ट स्वयं, सृष्टिकर्ता, सबै मानिसका संरक्षणकर्ता र उद्धारक हुनेछन्। न्यायाधीश सबै व्यक्तिको लागि मर्ने उही व्यक्तित्व हो, संसारमा मेलमिलाप ल्याउने उही व्यक्ति, सबैलाई शारीरिक जीवन दिनुहुन्छ र जीवित राख्नुहुन्छ। के हामी एक राम्रो न्यायाधीशको लागि सोध्न सक्छौं? परमेश्वरले उनको छोरोलाई न्याय प्रदान गर्नुभयो किनकि उहाँ मानिसका पुत्र हुनुहुन्छ। उहाँलाई थाहा छ मानव हुनु भनेको के हो। उहाँ हामीलाई मानिसहरु धेरै नजिकबाट चिन्नुहुन्छ, हामी मध्ये एक हुनुहुन्छ। पापको शक्ति र शैतान र उसको संसारको प्रलोभनलाई उहाँ आफैले जान्दछन्। उसलाई मानव भावना र ड्राइभ थाहा छ। उहाँ जान्नुहुन्छ कि उनीहरू कत्ति कडा परिश्रम गर्छन्, किनकि त्यसले मानिसहरूलाई सृष्टि गर्नुभयो र हामी जस्तो मानव बन्नुभयो, तर कुनै पाप बिना।
यस न्यायाधीशलाई कसले विश्वास गर्न सक्दैन? यस न्यायाधीशको भनाइलाई कसले प्रतिक्रया दिन सक्दैन, उसको अघि दण्डवत् गर्छ र आफ्नो अपराध स्वीकार गर्छ?
«साँच्चै, साँचो, म तिमीलाई भन्छु: जसले मेरो वचन सुन्छ र विश्वास गर्दछ मलाई पठाउनेलाई उहाँसँग अनन्त जीवन छ und kommt nicht in das Gericht, sondern er ist vom Tode zum Leben hindurch gedrungen» (Vers 24).
येशूले गर्नुहुने न्याय एकदम निष्पक्ष हुनेछ। यो निष्पक्षता, प्रेम, क्षमा, सहानुभूति र करुणा द्वारा विशेषता हो।
यद्यपि परमेश्वर र उहाँको पुत्र येशू ख्रीष्टले अनन्त जीवन प्राप्त गर्न प्रत्येक व्यक्तिको लागि उत्तम सर्तहरू सृष्टि गर्नुभयो, कोही-कोहीले उसको मुक्तिलाई स्वीकार गर्दैनन्। परमेश्वरले उनीहरूलाई खुशी हुन कर गर्नुहुन्न। तिनीहरूले जे रोपेका थिए त्यसको कटनी गर्नेछन्। जब न्याय समाप्त हुन्छ, त्यहाँ मानिसहरुको दुई समूह हुन्छन्, CS लुइसले यो पुस्तक आफ्नो एक पुस्तकमा राखे जस्तै:
एउटा समूहले भगवानलाई भन्नेछ: तपाईंको काम भयो।
भगवानले अर्को समूहलाई भन्नुहुनेछ: तपाईंको काम पूरा हुनेछ।
जब येशू पृथ्वीमा हुनुहुन्थ्यो, उहाँले नरकको बारेमा, अनन्त आगोको बारेमा, चिच्याउने र दाँत च्यात्ने कुरा गर्नुभयो। उनले दण्ड र अनन्त दण्डको कुरा गरे। यो हाम्रोलागि एक चेतावनी हो ताकि हामी परमेश्वरले उद्धारको प्रतिज्ञालाई हल्कासित लिदैनौं। परमेश्वरको वचनमा दण्ड र नरकलाई अग्रभूमिमा राखिएको छैन, त्यो अग्रभूमिमा सबै मानिसहरुप्रति परमेश्वरको प्रेम र सहानुभूति हो। परमेश्वर सबै मानिसका लागि छुटकारा चाहनुहुन्छ। जो भगवान र माफी को यो प्रेम स्वीकार गर्न चाहँदैन, परमेश्वरको इच्छा छ। कोही पनि जो स्पष्ट रूपमा चाहँदैनन् ऊ अनन्त दण्ड भोग्नेछ। येशू र उसको उद्धार कार्यको बारेमा कहिल्यै सिक्ने मौका नपाएको कसैलाई पनि परमेश्वरले निन्दा गर्नुहुन्न।
बाइबलमा हामी विश्व अदालतको दुई दृश्यहरू लेखिएको पाउँछौं। हामी मत्ती २ 25 र अर्को प्रकाश २० मा पाउँछौं। म यो पढ्न सिफारिस गर्दछु। तिनीहरू हामीलाई कसरी न्याय गर्ने येशूको परिप्रेक्ष्यमा देखिन्छन्। अदालत यी ठाउँहरूमा एक घटनाको रूपमा चित्रण गरिएको छ जुन एक निश्चित समयमा आयोजित हुन्छ। हामी एउटा शास्त्रपदमा जान चाहन्छौं कि यसले अदालतले लामो समय अवधि पनि भन्न सक्छ।
परमेश्वरको घरलाई यहाँ चर्च वा समुदायको नामको रूपमा प्रयोग गरिएको छ। उनी आज अदालतमा छिन। इसाईहरूले उनीहरूको समयमा परमेश्वरको आह्वान सुने र प्रतिक्रिया देखाए। तपाईंले येशूलाई सृष्टिकर्ता, रक्षक र उद्धारकर्ताको रूपमा चिन्नुभयो। उनीहरूको लागि अब अदालत भइरहेको छ। परमेश्वरको घरको न्याय कहिल्यै भिन्न हुँदैन। येशू ख्रीष्टले सबै मानिसका लागि समान स्तर प्रयोग गर्नुहुन्छ। यो प्रेम र दया द्वारा चित्रण गरिएको छ।
परमेश्वरको घरलाई यसको प्रभुले सबै मानिसजातिको उद्धारको लागि एउटा काम सुम्पनुभएको छ। हामीलाई हाम्रा सँगी मानवहरूलाई परमेश्वरको राज्यको बारेमा सुसमाचार प्रचार गर्न भनिन्छ। सबै मानिसहरूले यो सन्देश याद गरेनन्। धेरैले उनलाई घृणा गर्छन्, किनभने उनी मूर्ख, निर्बुद्धि वा मूर्ख छन्। हामीले यो बिर्सनु हुँदैन कि मानिसहरूलाई बचाउनु परमेश्वरको काम हो। हामी उसका कर्मचारीहरू हौं, जसले अक्सर गल्ती गर्छन। हाम्रो कामको सफलता सफल देखिदैन भने हामीलाई हतोत्साहित हुन नदिनुहोस्। परमेश्वर जहिले पनि काममा हुनुहुन्छ र मानिसहरूलाई बोलाउनुहुन्छ र आफैंलाई साथ गर्नुहुन्छ। येशू देख्नुहुन्छ कि बोलाइएकाहरू आफ्नो गन्तव्यमा पुग्नेछन्।